Firefox Nightly inowedzera saizi yeAwesome Bar uye inowedzera Kiosk Mode | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yepamusoro-yepamusoro-soro vhezheni ye browser yaMozilla ndeyeFirefox 69.0.2, asi mamwe matatu mikana iripo zvakare: iyo Beta, iyo Yekuvandudza Yekuvandudza, uye nehusiku. Iyo Beta ndeyeavo vanoda kuyedza nhau nekukurumidza, nepo husiku ichiri kuunza zvimwe zvinhu, asi inogona kunge iine mamwe mabhugi uye mamwe acho anogona kusasvika kune yakagadzikana vhezheni. Maviri eaya matsva, atowanikwa pa Firefox HusikuVari kupa zvakawanda zvekutaura nezvazvo.
Chekutanga chemabasa acho chinongobuda. Uyu mutsva mutsva mu Bhawa rinotyisa (iyo kero bar) inogadzira wedzera saizi yako patinenge tasarudza. Kune rimwe divi, saizi yayo yakadzikiswawo: patinosarudza iyo URL bar muFirefox 69 totanga kutaipa, mazano anotora hupamhi hwese hwebrowser, nepo muFirefox 71, yazvino Nightly vhezheni, inoramba iri muhukuru hwakawedzera , asi pasina kunyanyisa.
Nyowani Kiosk Maitiro eFirefox Husiku kuti utange mune yakazara skrini
Rimwe basa riri kupa kuti utaure ndiro ravanodaidza Kiosk Mode. Iyo "kiosk mode" ndizvo chaizvo chinhu chimwe chete chatinowana nekudzvanya F11, asi nemusiyano wekuti kero bar kana chero chimwe chinhu chekuwedzera hachizoonekwe kunyangwe tichifambisa mbeva zvakadii kumucheto kwechidzitiro. Tinogona kuiwana nekuvhura terminal uye typing zvinotevera:
Ramba uchifunga kuti kana tikanyora rairo yapfuura uye isu tine Firefox <71 yakaiswa, ichavhura yakagadzikana vhezheni uye hatizoone zvataida; hwindo nyowani rekuvhura rinovhura. Kuti tione basa idzva, tinofanirwa kunyora nzira yese pamberi pe «–kiosk», chimwe chinhu chatinogona kuwana zviri nyore kana tikadhonza iyo «firefox» faira kubva kuFirefox Nightly mabhainari kuenda kuchiteshi. Iyo nzira haizove inodikanwa kana chimiro chikatangwa zviri pamutemo.
Avo vanofarira, unogona kudhawunirodha Firefox Husiku kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Nyowani muFirefox Husiku: Iyo Inotyisa Bhawa inokura uye nyowani Kiosk Mode